ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd.
Hormone Rapid Test ၊
Hangzhou Testsea ဇီဝနည်းပညာ co., LTD.Hangzhou တွင်တည်ရှိသော အမျိုးသားအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Testsea တွင် zhejiang တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားမှ သုတေသီနှင့် အလုပ်သမားများစွာရှိသည်။ Testsea သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် အစားအစာဘေးကင်းမှုစမ်းသပ်ခြင်းအတွက် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို သုတေသန၊ တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းတွင် အထူးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ အစားအစာဘေးကင်းရေး လျင်မြန်စွာစမ်းသပ်ခြင်း၊ အစာအင်ဇိုင်းခုခံအားစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အင်ဇိုင်းအသစ်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့် ၂၈ မျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့လျှောက်ထားထားပါသည်။ Testsea သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သိပ္ပံသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ၊ လုပ်ငန်းများ၊ သုတေသနအဖွဲ့များနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ကုန်ကြမ်းဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ Testsea စုစုပေါင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဧရိယာသည် 400 စတုရန်းမီတာ GMP 100,000 အဆင့်သန့်စင်ရေးအလုပ်ရုံအပါအ ၀ င် 2,000 စတုရန်းမီတာကျော်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ISO13485 နှင့် ISO9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြင့် သုတေသန၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ပြည်တွင်းရောင်းချမှုနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် တင်းကြပ်စွာ လိုက်နာလျက်ရှိသည်။ ရောင်းချခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များကို ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပရှိ သုံးစွဲသူအများအပြားက ကောင်းမွန်စွာ လက်ခံကြသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရှေ့တောင်အာရှ၊ ဥရောပ၊ အာဖရိက၊ လက်တင်အမေရိကနှင့် အခြားနိုင်ငံများနှင့်တောင်မှ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်များစွာနှင့် vitro ရောဂါရှာဖွေထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို ထူထောင်ထားသည်။
Testsea တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လုပ်သားများနှင့် ကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းကိရိယာများ ပါ၀င်သော ဆရာဝန်များနှင့် သခင်များ ဦးဆောင်သော သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့တစ်ခု ရှိသည်။ recombinant antigen ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် 18g/ လသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
Testsea သည် "သမာဓိ၊ အရည်အသွေး၊ တာဝန်ယူမှု" အယူအဆကို လိုက်စားပြီး အရည်အသွေး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို လိုက်နာကာ အရည်အသွေးမြင့် ရောဂါရှာဖွေရေး ပစ္စည်းအသစ်များကို အဆက်မပြတ် အားထုတ်လုပ်ဆောင်ပါသည်။
မွေးဖွားမှု၊ ကူးစက်ရောဂါ၊ အလွဲသုံးစားပြုဆေးဝါးနှင့် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုပညာအတွက် လျင်မြန်သောရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်မှု။
လျင်မြန်သောရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်မှုများ (RDTs) သည် ပြုစုကုသပေးသည့်ရောဂါရှာဖွေရေးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆိုလိုသည်မှာ အဆိုပါစစ်ဆေးမှုများသည် ကျန်းမာရေးဌာန၊ စစ်ဆေးသည့်နေရာ သို့မဟုတ် အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတွင် ရှိနေစဉ် လူနာအား ရောဂါရှာဖွေရေးရလဒ်များ အဆင်ပြေပြေနှင့် ချက်ချင်းပေးဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြုစုသည့်နေရာ၌ ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည် ရောဂါရှာဖွေမှုရလဒ်များရရှိရန် အကြိမ်ကြိမ်လာရောက်ရန် လိုအပ်မှုကို လျော့နည်းစေပြီး ရောဂါရှာဖွေမှု၏ တိကျမှုနှင့် လူနာသည် ကုသမှုခံယူရမည့် အခွင့်အလမ်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေကာ၊ မျှော်မှန်းထားသောကုသမှုအပေါ် မှီခိုအားထားမှုကို လျှော့ချကာ လူနာရှေ့တွင် ဖျားနာမည့်အန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးသည်။ မှန်ကန်သောရောဂါလက္ခဏာကို ပြုလုပ်ထားသည်။ အမြန်စစ်ဆေးမှုများကို အိမ်များမှ မူလစောင့်ရှောက်မှုဆေးခန်းများ သို့မဟုတ် အရေးပေါ်ခန်းများအထိ စောင့်ရှောက်မှုပေးသည့်နေရာအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုကြပြီး အများအပြားသည် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းများမလိုအပ်ပါ။
လိပ်စာ- No.13-2 Guanshan Road, Yuhang District, Hangzhou, China။
ဖုန်း : 400-083-7817； 0086-15355433244
Hangzhou Testsea ဇီဝနည်းပညာပူးပေါင်း , LTD. Hot Products များ - ဆိုက်မြေပုံ
Canine Coronavirus Ag Rapid Test Kit, Feline Coronavirus Fcv Ag စမ်းသပ်ကိရိယာ, Canine Coronavirus Ag စမ်းသပ်မှု, Feline Coronavirus စမ်းသပ်ကိရိယာ, Feline Coronavirus စမ်းသပ်မှု, High Sensitive Feline Coronavirus Ag Test Kit,